musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Sandals Resorts: Makumi emakore ekutarisana neCaribbean
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Caribbean • Curacao Kuputsa Nhau • Grenada Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Kutarisirwa • Mutsvene Lucia Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Sandals Foundation ichibatsira maCaribbean
Gore rino rinoratidzira makore gumi-egore reSandals Foundation, ruoko rwakanaka rweSandals neBeaches Resorts. Kwemakore gumi apfuura, Sandals akashanda nesimba kuti abate hupenyu hwevanhu vanopfuura mazana masere nemakumi mana nemakumi mana emhiri kweCaribbean.
Sandals Resorts International yatora zvimwe zvezvinoda kuitwa muzvitsuwa mainoshanda.
Izvo hazvisi zvekungounganidza nekushandisa mari seSandals zvakare inoshandisa kuda kwayo, simba, hunyanzvi, uye simba rechiratidzo.
Iyo Sandals Foundation inobata nyaya dzakanangana nemisoro mitatu yakafara - dzidzo, nharaunda, uye nharaunda.
Sandals Resorts yakazvipira kune zviwanikwa zvinogadzira yakanaka uye inogara yakasimba zviwi pazvitsuwa zvainoti imba. Kubudikidza neSandals Foundation, Sandals Resorts International inogoneswa kutora zvimwe zvezvinoda kuitwa muzvitsuwa kwainoshanda nekuita iyo Carribean yakanakisa sezvairi. Izvo hazvisi zvekungounganidza nekushandisa mari. Sandals zvakare inosunga kuda kwayo, simba, hunyanzvi, uye simba rechiratidzo kugadzirisa nyaya dzakanangana nemisoro mitatu yakafara - dzidzo, nharaunda, uye nharaunda.
The Sandals Foundation inopa vese vana nevakuru maturusi akakosha senge kudzidza, zvekushandisa, tekinoroji, zvirongwa zvekuverenga, kuraira, uye kudzidzisa kwevadzidzisi, kuvabatsira kuti vasvike pakukwanisa kwavo kuzere. Kusvika parizvino, 59,036 mapaundi emidziyo akapihwa nezvikoro mazana mashanu nemakumi manomwe nesere zvakakanganiswa, kusanganisira 578 makomputa akapihwa; Mabhuku 2,506 274,517 akapiwa; Vadzidzi ve169,079 vakanganisa; 2,455 vadzidzisi vakadzidziswa; uye 180 kudzidza kwakapihwa.
KuSandals Foundation, zvirongwa zvinogadzirwa uye zvinotsigirwa izvo zvinobata uye zvinokurudzira vanhu kuburikidza nekudzidziswa kwehunyanzvi uye izvo zvinogadzirisa nyaya dzakaomarara dzemagariro kumusoro kusimbisa nharaunda. Ikoko iye ave nenhengo dzemunharaunda mazana matatu nemakumi matatu nemana nemakumi matanhatu nematanhatu nenhanhatu dzakakanganiswa zvine mutsindo kusanganisira vanhu mazana maviri nemakumi masere ane mazana manomwe nemakumi manomwe nemanomwe kuburikidza nehurongwa hwehutano; 384,626 Chimiro Chikuru! Inc. Dental + iCARE varwere, 248,714 vakapa matoyi; Katsi nembwa 243,127 dzakaraswa uye dzakasungwa; uye 102,150 pre-term vacheche vanowana mukana wekurwa neiyo hwaro hweSiseko rubatsiro rwevanhu 4,218 vemunharaunda vanozvipira.
SaSandals, vanovimbisa kusimudzira ruzivo rwezvakatipoteredza, kugadzira nzira dzekuchengetedza dzinoshanda, uye kudzidzisa zvizvarwa zvinotevera nzira yekutarisira nharaunda dzavanogara nekuchengetedza nharaunda. Nekuda kweSandals, kuziva kwezvakatipoteredza kwakasvika 43,871 12,565 nemiti 83,304 yakasimwa; Makumi mazana matatu nemakumi matatu nemana makumi matatu nematatu akavhurwa zvakachengeteka; 6,000 zvidimbu zvemakorari zvakadyarwa; 37,092 mapaundi emarara akaunganidzwa; uye nzvimbo nhanhatu dzemumvura dzinowana rubatsiro kubva kuSandals Foundation.
Mipiro yese, ingave mari, sevhisi, kana mhando, 100% inoenda yakanangana nekutsigira maSandals Foundations zvirongwa uye zvirongwa zvinoita mutsauko usingagumi kune vanhu nenzvimbo dzeCaribbean.
Iyo Sandals Foundation inotsvaga kubatsira kuzadzisa vimbiso yayo kunharaunda yeCaribbean yekuvandudza hupenyu hwevanhu uye kuchengetedza zvakatipoteredza kuburikidza nekudyara muzvirongwa zvakagadzikana mune zvedzidzo, nharaunda uye nharaunda.